“Naftaan U Huri Doonaa” - Miralem Pjanic Oo Ka Hadlay Heshiiska Uu La Galay Barcelona Iyo Farriin Uu iska Sii Horreysiiyey | Laacibnet.net
“Naftaan U Huri Doonaa” – Miralem Pjanic Oo Ka Hadlay Heshiiska Uu La Galay Barcelona Iyo Farriin Uu iska Sii Horreysiiyey
Xiddiga khadka dhexe ee Miralem Pjanic ayaa markii ugu horreysay ka hadlay heshiiska uu la galay kooxda reer Spain ee Barcelona, taas oo uu qalinka ugu duugay afar sannadood oo uu ka ciyaari doono Camp Nou.
30 jirkan ayaa qayb ka noqday heshiis ciyaartoy isweydaarsi ah oo ay Juventus iyo Barcelona isku dhaafsadeen isaga iyo Arthur Melo, waxaanay labadooduba tegi doonaan kooxahooda cusub marka uu dhamaado xili ciyaareedku.
Miralem Pjanic oo ka hadlay kooxdiisa cusub ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay oo uu wax walba u samayn doono, waxaanu yidhi: “Aad ayaan ugu afaraxsanahay. Wax walbana waan u huri doonaa kooxdan. Si degdeg ah ayaynu isku arki doonaa. Forca Barca!”
Kubbad-sameeyahan oo tijaabada caafimaadka ka gudbay Isniintii ayaa hore ugu soo ciyaaray kooxaha Roma iyo Lyon, waxaanu sii joogi doonaa Turin illaa inta ay kooxdiisu ka dhamaysanayso kulamada uga hadhay horyaalka Serie A iyo sidoo kale Champions League.
Barcelona ayaa shaaciyey in laacibkan ay la gaadhay heshiis afar sannadood ah, ayna kagala soo wareegayso Juventus lacag dhan 60 milyan oo Euro iyo 5 milyan oo kale oo dheeraad ah oo ku xidhnaan doona bandhig ciyaareedkiisa.
Laakiin lacagtan ayaanay Barcelona bixin doonin, maadaama ay Juventus ka qaadanayso Arthur Melo oo lagu qiimeeyey 72 milyan oo Euro iyo 10 milyan oo kale oo ku xidhnaan doona waxqabadkiisa.
Sida uu heshiiskani dhigay, Juventus ayaa bixin doonta farqiga u dhexeeya qiimeyaasha labada ciyaartoy, taas oo ah 12 milyan oo naqad hore ah iyo 5 milyan oo kale oo bandhigga Arthur ku xidhan.
Miralem Pjanic waxa uu xili ciyaareedka dambe ka garab ciyaari doonaa Sergio Busquets iyo Frankie de Jong iyo sidoo kale labada ciyaartoy ee mustaqbalkoodu laalan yahay ee Arturo Vidal iyo Ivan Rakitic haddii ay sii joogaan Camp Nou.
Da’yarka soo baxay ee Riqui Puig ayaa sidoo kale ay Barcelona rajaynaysaa inuu wax badan ka baran doono Pjanic, halka Pedri, Trincao iyo Matheus Fernandes oo kulliyadda laga soo dallacsiinayo ay iyaguna garoonka kusoo gaadhi doonaan.
AABE DIYE says:
Ninkan waa nin Oday ah oo Da,a barcelona soo gadashdiisa,wey ku fashilan tay ,khadka dhexe ee barcana,wax is badal ah kamma samen doonoh.Mahdsnd